Denda Inc.: Mushonga, ponesa nyika kubva kudenda | Linux Vakapindwa muropa
Denda Inc.: Mushonga, ponesa nyika kubva kudenda
Vakakurumbira vhidhiyo mutambo Dambudziko Inc. inowanikwa kuHumble Store uye pa chiutsi, sezvamunoziva. Pamusoro pezvo, zita iri rakawana mukurumbira mushure mekunge vazhinji vaedza kurishandisa sechishandiso kufanotaura kuti denda reSARS-CoV-2 raizofambira mberi sei munyika, uye kunyangwe kubvunza vanogadzira pamusoro peCovid-19 ...
Dambudziko Inc: Shanduko yakaita senge hombe yekuvandudza, asi kuwedzera uku kwakaguma kuve kukuru zvakakwana kuti morph ive mutambo mutsva. Asi vagadziri vayo havana kugara vasina basa nebasa iri. Zvino, vagadziri vayo vakazivisawo imwe nyowani yemahara yekuvandudza yekuwedzera (DLC).
Ndemic Zvisikwa zvakashanda pamwechete nevakawanda masangano ezvehutano kubva kunyika chaiko, kusanganisira Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), World Health Organisation (WHO), uye Global Outbreak Alert uye Response Network (GOARN).
MuDLC nyowani yePlague Inc: Mushonga, zvemagariro, zvehupfumi uye zvehutano zvakadzidzwa pasirese kuchengetedza chirwere, pamwe nekuchengetedza kuvimba kwevanhu. Naizvozvo, mumwe mutambo wakasiyana kune dzakapfuura, uko kwakapesana kwaiitirwa, kugadzira hutachiona uye kuusunungura kuti utapukire nyika ...
Zvino uchafanira shanda kuponesa nyika kubva kuzvipukanana izvi. Semuenzaniso, nekutsvaga kwekutsvaga, kuvandudza mushonga uye kugadzira, nezvimwe. Kwese kuomarara kwekubvisa denda repasi rese izvozvi mumutambo wevhidhiyo.
Ndemic Creations afunga nezve iri zita nekuda kwemamiriro azvino echirwere checoronavirus, nekudaro achigadzira ino zano reyeti uye mhinduro vhidhiyo mutambo pamberi pechirwere. Denda Inc., risina kuidya kana kuinwa, rakazviisa pakati pechamupupuri iyi 2020, uye kwete chete nekuda kwechipo chayo che $ 250.000 munaKurume kubatsira padambudziko rehutano, asi nekuda kwezvakataurwa kwekutanga. ndima ...
Uye nenzira, nhau dzakanaka ndedzekuti Dambudziko Inc: Mushonga uchave wakasununguka kwenguva pfupi kune vese vatambi. kusvikira Covid-19 yatongwa. Kunyangwe pasina zuva rekuburitsa parizvino (rinofanira kuzivikanwa mumavhiki anotevera).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Denda Inc.: Mushonga, ponesa nyika kubva kudenda
Mhinduro yaTwitch kuvashandisi vakatsamwa nezvehukuru vhidhiyo kubviswa
Iyo PinePhone KDE Nharaunda Yenharaunda inosunungurwa zviri pamutemo